Bangladesh: Ankizivavy Vazimba Teratany Iray Hafa Indray Voaolana Sy Novonoina · Global Voices teny Malagasy
Bangladesh: Ankizivavy Vazimba Teratany Iray Hafa Indray Voaolana Sy Novonoina	Voadika ny 02 Janoary 2013 6:22 GMT
Zarao: Nisy indray ankizivavy vazimba teratany iray novonoina rehefa avy naolana tamin'ny fomba mahatsiravina tany amin'ny tanànan'i Borodalupara, Kawkhali Upazila any amin'ny distrikan'i Rangamati. Ilay tra-doza, Khomaching Marma (14 taona) dia mpianatra amin'ny kilasy taona faha-8. Hita tany amin'ny tehezan-tendrombohitra miala 200-300 metatra amin'ny trano fonenany ny vatana mangatsiakany. Nandeha ho aminà ala kely tsy lavitra teo mba hitondra ny biby fiompin'ny fianakaviany hody an-tanàna no nahitàna azy farany.
Rina Dewan dia nampakatra tao amin'ny rindriny ao amin'ny Facebook[bn] izay heveriny ho antony ao ambadik'izao heloka bevava tsy hay zakaina izao :
Misy tanàna iray atao hoe Nallyachari Uttor Matha, onenan'ny Voanjo, afaka antsasaka kilaometatra miala ny toerana nahitàna ny vatana mangatsiakan'i Thomaching. Nandritra ny fiandohan'ny andian-taona 1980 dia nanaisotra ireo vazimba teratany Marmas hiala ny taniny ny governemanta ary nametraka ireo voanjo Bengalis tao. Ankehitriny dia milaza ny ampahany betsaka amin'ireo tany ao Borodalupara ho tafiditra amin'ny azy ireo ireto voanjo ireto. Andro vitsy lasa izao, namboly sakamalaho teo amin'ny taniny ny sasany tamin'ireo mponina Marma saingy nopotehan'ireo voanjo ireo ny fambolen-dry zareo sady nanangana korontana. Fantatra ihany koa fa efa misy lonilony momba ny tany eo amin'ny dadatoa avy amin'ny renin'i Thomaching Marma sy ireo voanjo Bengali. Araka izany, azo ahiahiana ho naolana sy novonoina izy ho famaliana faty.
Nitombo be tato ho ato ny herisetra atao amin'ireo vehivavy vazimba teratany. Sary an'i A M Ahad. Fizakà-manana Demotix
Nitombo be tato ho ato ny herisetra atao amin'ireo vehivavy vazimba teratany. Volana vitsy lasa izay, ankizivavy teratany iray hafa indray no voaolana sy nisy namono. Mpianatra tamin'ny kilasy fahadimy izy. i Hari kishore Chakma, mpanao gazety, dia nanome antontan'isa vitsivitsy mikasika ny fanolanana mahazo ny vehivavy vazimba teratany ao anatinà lahatsoratra iray tao amin'ny gazety mpiseho isan'andro daily Prothom Alo [bn] :
Hatramin'ny Novambra tamin'ity taona ity, ankizivavy sy vehivavy vazimba teratany niisa 20 no voaolana tany amin'ny distrikan'ny three hill . Manampy ity lisitra tsy mitsaha-mitombo ity ny anaran'i Thomaching Marma amin'izao fotoana. Tamin'ny 2011, vehivavy vazimba teratany niisa 10 no voaolana. Nitatitra ity antontanisa ity ny Kapaeng, fikambanana iray mpiaro ny zon'olombelona. Araka ity fikambanana ity, vehivavy vazimba teratany niisa 51 no niharan'ny herisetra nandritra ny taona. 31 izany tamin'ny 2011 ary 4 monja tamin'ny 2008.
Ity fanolanana sy famonoana feno habibiana ity dia nanaparitaka indray ny hatezerana sy ny haromontana nanerana ny firenena. Nisy fitanjozorana nokarakaraina tao Dhaka, Chittagong ary Sylhet. Naneho ny hatezerany ihany koa ireo mpisera anaty aterineto ary nanao hetsi-panoherana.
Hetsi-panoherana tao Dhaka hanoherana ny fanolanana sy ny famonoana ny ankizivavy vazimba teratany. Sary avy amin'i Firoz Ahmed. Fizakà-manana Demotix.
Mithun Chakma Jummo namoaka tao amin'ny Facebook hoe:
Sahala amin'ny vatana tsy mandre na inona na inona, nangatsiakan'ireo anabavintsika, dia hanjary tsy handre na inona na inona koa va re isika e? Nanohitra mafy tamin-kery ny fanolanana faobe farany teo i India, nikiaka nitaky ny rariny ho fitsaràna ny fanaovana antsojay ara-nofo amin'ny ankizivavy i Imphal. Inona no tokony ho hetsi-panoherantsika? Fanaovana fitanjozorana iray fotsiny? Dia avy eo hangiana sy tsy handre na inona na inona intsony indray!
Adivasi Aodhikar Andolon (CHT) nanoratra hoe :
Tany anaty vaovao, nahita an'i India nitroatra nanohitra ilay fanolanana faobe tany anaty fiara fitateram-bahoaka tao Delhi aho. Nahafinaritra ny nahatsapa ny firaisankinan-dry zareo. Nijoro niaraka tamin'izy ireo koa ny media. Voatery tsy maintsy nisambotra ireo nahavanon-doza ny governemanta Indiana.
Vao haingana no nisy ankizivavy vazimba teratany naolana sy novonoina tany amin'ny tanànan'i Borodalupara any Kawkhali ao amin'ny distrikan'i Rangamati.
Dia? Tsy vitan'ny polisy ny nisambotra na iray aza tamin'ireo nahavanon-doza!
Dia tahaka izany, an-jatony maro ireo anabavy sy renintsika vazimba teratany no nandritra ny fotoana ela lasa iharan'ny fanolanana sy famonoana .
Anik, bilaogera, nanoratra hoe :
Ireny fandikan-dalàna ireny dia mametraka sary irain'i Bangladesh ho ao an-tsaiko. Sarinà mpanolana sy mpamono olona. Sahala amin'ny tsapa hoe misy mpanolana sy mpamono olona gaigy be miherongerona manodidina antsika, amin'ny fotoana rehetra. Tsy misy antoka na kely aza fa hoe hahafehy tena tampoka eo ny sasany amin'izy ireny ary hanaraka ny filàny.
Vakio amin'ny teny English, Français, Swahili, Ελληνικά, Español, Aymara, Türkçe, বাংলা
FanoheranaFoko sy FiavianaMediam-bahoakaTeratanyVehivavy sy MiralentaZon'olombelona